Editor Team – ဝင်းမေတ္တာ
ညနေ (၂၆၁) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၄)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၁) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၄) (သံ ၊ ၂ ၊ ၄၉၁ ။ ဂိလာနဒဿနသုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘာရ = ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဟူသည် အဘယ်တရားကို ခေါ်ပါသလဲ? ဘာရဟာရ = ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဆောင်သူဟူသည် အဘယ်ကို ဆိုလိုပါသလဲ? ဘာရာဒါန = ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ခံယူခြင်းဟူသည် အဘယ်အရာ ဖြစ်ပါသလဲ? ဘာရနိက္ခေပန = ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ပစ်ချခြင်းဟူသည် အဘယ်ကို ဆိုလိုပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် …
ညနေ (၂၆၁) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၄) Read More »
နံနက် (၂၂၇) – အားကိုးတရား ရှိထားစေချင် (၂)
နံနက် အလုပ်ပေးတရား အားကိုးတရား ရှိထားစေချင် (၂) (ပထမနာထသုတ်၊ အံ၊ ၃၊ ၂၇၅-၂၇၆၊ ဒသကနိပါတ်) နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ အားကိုးတရား ရှိထားစေချင် (ထမနာထသုတ်)
ညနေ (၂၆၀) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၃)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၀) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၃) (သံ ၊ ၂ ၊ ၄၉၁ ။ ဂိလာနဒဿနသုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘယ်လိုနေသူသည် ဝဋ်ဆင်းရဲသို့ ရှေ့ရှုဦးတည်နေသူ ဖြစ်ပါသလဲ? ဘယ်လိုနေသူသည် ဝဋ်ဆင်းရဲသို့ ရှေးရှုဦးတည် မနေသူ ဖြစ်ပါသလဲ? ဘယ်လို ပြောဆိုတတ်သူသည် လူအများနှင့် ငြင်းခုံ(ရန်ဖြစ်တတ်)သူ ဖြစ်ပါသလဲ? ဘယ်လို ပြောဆိုတတ်သူသည် လူအများနှင့် မငြင်းခုံ(ရန်မဖြစ်)သူ ဖြစ်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ …
ညနေ (၂၆၀) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၃) Read More »
နံနက် (၂၂၆) – အားကိုးတရား ရှိထားစေချင် (၁)
နံနက် အလုပ်ပေးတရား အားကိုးတရား ရှိထားစေချင် (၁) (ပထမနာထသုတ်၊ အံ၊ ၃၊ ၂၇၅-၂၇၆၊ ဒသကနိပါတ်) နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ အားကိုးတရား ရှိထားစေချင် (ထမနာထသုတ်)
နံနက် (၂၂၅) – ပြည့်စုံမှုနှင့် ပျက်စီးမှုတို့၏ အကြောင်းများ (၉)
နံနက် အလုပ်ပေးတရား ပြည့်စုံမှုနှင့် ပျက်စီးမှုတို့၏ အကြောင်းများ (၉) (သမုဒ္ဒကသုတ်၊ သံ၊ ၁၊ ၂၂၉) နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ ပြည့်စုံမှုနှင့် ပျက်စီးမှုတို့၏ အကြောင်းများ (သမုဒ္ဒကသုတ်)
ညနေ (၂၅၉) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၂)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၅၉) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၂) (သံ ၊ ၂ ၊ ၄၉၁ ။ ဂိလာနဒဿနသုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ အဘယ်သူသည် အိမ်သို့ဝင်သူ၊ အဘယ်သူသည် အိမ်သို့မဝင်သူ ဖြစ်ပါသလဲ? အဘယ်သို့သောရဟန်းသည် ရွာ၌ ရောနှောခြင်းရှိပြီးနေသူ၊ အဘယ်သို့သောရဟန်းသည် ရွာ၌ ရောနှောခြင်းမရှိဘဲနေသူ ဖြစ်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း